पशुपतिनाथले सबैको मनोकाक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल श्रावण २६ गते शनिवार – Etajakhabar
पशुपतिनाथले सबैको मनोकाक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल श्रावण २६ गते शनिवार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग÷वारवेला,मुहूर्त र राशी श्रीसूर्य दक्षिणायन,वर्षा ऋतु,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,सम्वत २०७५ साल श्रावण २६ गते शनिवार नेपाल सम्बत ११३८ दिल्लागा,सन् २०१८ अगस्त ११ तारिक कृष्णपक्ष औसी तिथि अपरान्ह ३ वजेर ४७ मिनेटसम्म,अश्लेषा नक्षत्र राती १ वजेर ५० मिनेटसम्म नक्षत्र, व्याघातयोग,नागकरण,आनन्दादियोग मानस,सूर्य कर्कट राशीमा,चन्द्रमा राती १ वजेर ५० मिनेटसम्म कर्कट उप्रान्त सिंह राशीमा ।
ॐः–राहुकालः–विहान८÷५१ वजेबाट१०÷३० वजेसम्म रहनेछ,यमघण्टायोगः–अपरान्ह १÷४८ वजेबाट ३÷२७ वजेसम्म रहनेछ,दूरमुहूर्तः–विहान ७÷१८ वजेबाट ८÷११ वजेसम्म रहनेछ,यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷४२ वजेबाट मध्यान्ह १२÷३५ वजेसम्म रहनेछ । गुली कालः–विहान५÷३२ वजेबाट ७÷१२वजेसम्म रहनेछ,यो सामान्य मानिन्छ ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः७÷११ वजेसम्म काल वेला,७÷११वजेदेखि ८÷५० वजेसम्म शुभवेला,८÷५० देखि १०÷२९ वजेसम्म रोगवेला,१०÷२९ देखि १२÷८ वजेसम्म उद्वेगवेला,१२÷८ देखि १÷४७वजेसम्म चर वेला,१÷४७ देखि ३÷२६ वजेसम्म लाभवेला,३÷२६ देखि ५÷५ वजेसम्म अमृतवेला र ५÷५ वजे देखि सूर्यास्तसम्म कालवेला रहनेछ ।
ॐः–सूर्यास्तबाट ८÷६ वजेसम्म लाभवेला,८÷६ वजेदेखि ९÷२७ वजेसम्म उद्वेगवेला,९÷२७ देखि १०÷४८ वजेसम्म शुभवेला,१०÷४८ देखि १२÷९ वजेसम्म अमृतवेला,१२÷९ देखि१÷३० वजेसम्म चरवेला,१÷३० देखि २÷५१वजेसम्म रोगवेला,२÷५१वजे देखि ४÷११ वजेसम्म कालर ४÷११ वजे देखि सूर्योदयसम्म लाभ वेला रहनेछ ।
घर खर्च बढ्नेछ । जति राम्रो गरेर काम गरे पनि जश कम मिल्नेछ । मनमा शान्ति मिल्ने छैन । कममा विभिन्न खालका समस्या आउने छन् । धन सम्पतिको विषयलाई लिएर विवाद पर्न सक्छ । कुरा काट्ने छन् ।
आफ्नो काम गर्न आफै सक्षम हुनुहुनेछ । अधिकाँश कामबाट लाभ लिन सकिनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रै होला । कामको बीचमा विचार परिवर्तन नगर्नु होला । ढिला गरेमा अवसर गुम्नेछ ।
अस्थिरताले अनिष्ट निम्त्याउनेछ,धैर्यता पूर्वक काम गर्नु होला । बोल्यो कि पोल्यो भन्ने जान्नु होला । आर्थिक कारोवार सकेसम्म नगर्नु होला दिएको धन डुब्न सक्छ । आस्था र विश्वास गुम्ने छ ।
शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । समयको सदुपयोग गर्न पछि नपर्नु होला । उत्तम आसन र भोजन प्राप्तिको योग प्रबल देखिन्छ । आम्दानी सन्तोषजनक नै होला । स्वतन्त्र व्यापार बढि फलदायी देखिन्छ ।
अनावस्यक क्षेत्रमा धन खर्च हुनसक्छ सचेत रहनु होला । गरेका काम आफ्ना लागि भन्दा अरुका लागि बढि हुने देखिन्छ । विबादमा नफस्नु होला घाटा हुनेछ । व्यापारमा हानी नोक्सान हुन सक्छ ।
दिन अनुकुल छ समयमा काम गर्नु होला ढिला गर्दा अवसर गुम्ने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी राम्रै हुनेछ । एउटा कामको टुङ्गो नलागि आर्को काममा हात नहाल्नु होला । सामान्य खालको सहयोग मिल्नेछ ।
समयले साथ दिने देखिन्छ,हेलचक्र्याई नगरि अगाडि बढ्नु होला । गोपनियता भङ्ग गर्दा आफैलाई घाटा हुनेछ । काम गर्न सके दाम र नाम दुर्व आर्जन गर्न सकिनेछ । सामाजिक कामबाट प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
भाग्यले थोरै साथ दिनेछ । परोपकारी काम हुनेछन् । आस्था र विश्वास बढ्नेछ । आफ्नो कामले विस्तारै गति लिनेछ । परिवारिक सुख थोरै मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा खासै प्रगति हुनेछैन ।
आफ्नो धन अरुको लागि खर्च गर्नु पर्ला । स्वास्थ्यमा लगानी बढ्न सक्छ । मानसिक चिन्ता बढ्नेछ । लेनदेन कारोवारमा अवरोध आउन सक्छ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । थालेका धेरै काम अधुरा रहने छन् ।
कुनै काम गर्नु छ भने गरिहाल्नु होला पछि गरौला भनेका काम साचिने छन् । जीवन साथिको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम सफल हुने छन् । लोभ मोह बढ्नेछ । स्वव्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ ।
सहयोग पाईने छैन । मुद्धा मामिलामा विजया हात लाग्नेछ । प्रतिश्पर्धामा अगाडि हुनुहुनेछ । मिलेर भन्दा एक्लै गरेका काम बढि सफल होलान् । व्यापार व्यवसायमा क्रमिक सुधार आउनेछ । नयाँ लगानी नगर्नु होला ।
विचार पूर्वक काम गर्नु होला । काममा आलटाल गर्दा पछि परिनेछ । पठन पाठन कार्यमा पनि आफुले सोचे जस्तो सफलता मिल्ने छैन । आत्मविश्वासका साथ काममा लाग्नु होला । व्यापारबाट अल्प लाभ हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २५, २०७५ समय: २३:०५:०१
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन २९ गते बुधबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन २८ गते मँगलबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन २७ गते सोमबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”